तिथि मेरो पत्रु »5Taboos डेटिंग तपाईं तोड र दूर चालू गर्नुपर्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 01 2020 |2मिनेट पढ्न
किन एक डेटिङ taboos द्वारा फंस गर्नुपर्छ? अक्सर यी taboos सही समयमा ठीक व्यक्ति भर आउँदै मानिसहरू रोक्न; विभाजित अप र सम्बन्धविच्छेदलाई को यस्तो वृद्धि दर संग, यो केवल unpardonable छ. त्यसैले, तपाईं एक तिथि मा बाहिर जानुअघि के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा यी taboos तोडने छ. यहाँ तपाईं को हटाउनु पर्छ केहि डेटिङ taboos हो.
1 ओह! त्यो मानिस राम्रो देखिन्छ, तर मलाई भन्दा धेरै छोटो छ.
उचाइ मा के? मानिस स्त्रीको भन्दा छोटो छ किनकी कसरी सम्बन्ध गलत जान सक्छ? बरु एक मानिसको उचाइ मा जाँच, तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, व्यक्ति, शिक्षा र बुद्धि. अवश्य राम्रो लग रहेको छ र शक्ति जस्तै अधिक सतही गुणहरू लागि जान सक्नुहुन्छ (हो ती शरारती पटक), तर एक मानिसको उचाइ मा आधारित निर्णयहरू यो बस लायक छैन.
2 म अग्रसर एक हुनु हुँदैन.
यो पनि होशियार र राम्रा महिला केही बञ्चित एउटा डेटिङ वर्जित छ. यो वर्जित वास्तवमा महिला विश्वस्त डेटिङ रुचि गर्छन थाहा हुन्छ कि एक मिथक देखि पलाउँछ, छोड्छन्-getters हो र उनीहरूलाई बलियो महसुस गर्ने महिलाहरु द्वारा बढी सजिलै लालायित छन् जो बलियो पुरुष, विश्वस्त र जाने-रही. यो बस फोहोर छ.
यो सबै मानिसहरू समान छन् भन्ने अनुमान गर्न बिल्कुल गलत हो. धेरै छन्, र हाँ कारण अस्वीकृति गंभीर डर कहिल्यै बाहिर महिलाहरु सोध्न धेरै गर्ने; महिला सधैं यो तिनीहरूलाई बाहिर वा सेक्स सोधेर हुन पहिलो आफै अग्रसर होस् आवश्यकता. यो, तथापि, कुनै पनि हालतमा त्यस्ता पुरुष महान जीवन साझेदार वा हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई स्थापित (तपाईं कि टाढा लाग्दैछ भने) डेटिङ जीवनसाथी.
3 उहाँले बिल विभाजित मलाई सोधेको छ; उहाँले महिलाको लागि वास्तविक आदर गर्नुपर्छ.
जरूरी छैन; आफ्नो मायालु आत्म प्रदर्शन गर्ने मौका हराएको भन्दा अन्य, बिल मानिसहरू विभाजित गर्न चाहने एक मूलभूत stinginess प्रदर्शन समाप्त गरेर. दूर त्यस्ता पुरुष देखि रहनुहोस्.
4 यो सिर्फ हाम्रो पहिलो तारीख छ; कसरी म सेक्स गर्न सक्छन्?
यस भयानक डेटिङ वर्जित गरेर घोचेको महिला पुरुष पहिलो रात घनिष्ठ प्राप्त गर्ने महिला आदर कहिल्यै र यसरी तिनीहरूलाई माया बस्छ कहिल्यै गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान.
ती महिला ठूलो सम्बन्ध एक पल स्पार्क वा रसायन बारेमा अक्सर याद गर्नुपर्छ. तपाईं एक पहिलो तारीख मा सेक्स थियो किनकी, तपाईं सजिलो भएको छैन. पहिलो-मिति मा सेक्स राम्रो तपाईं र तपाईंको नयाँ डेटिङ जोडीलाई राम्ररी मिलेर साँच्चै gelling छन् भन्ने तथ्यलाई को सूचक हुन सक्छ.
5 त्यो मान्छे धेरै लोभ्याउने छ, तर उहाँले मेरो सहयोगी छ.
यो वर्जित सहयोगिहरु बीच रोमान्टिक सम्बन्ध अक्सर कारण डाह जस्तै कारक गर्न अल्पकालीन हुन्, व्याकुलता, कृपावाद र गफ. तिनीहरूले एक टुक्रिन तिनीहरूलाई लागि बिल्कुल दयनीय कार्यस्थल मा जीवन बनाउन सक्छ कि डर पनि धेरै टाढा यस्तो सम्बन्ध देखि शर्म.
आफ्नो सहकर्मी मा तपाईं सिद्ध जीवन साथी हुन सक्छ रूपमा सकेसम्म चाँडै यो वर्जित को हटाउनु. यस्तो सम्बन्धको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा तपाईं को दुई प्रत्येक अन्य समय को एक धेरै खर्च गर्न पाउनेछ छ; तपाईं र काम देखि सँगै यात्रा गर्न सक्छन्, तपाईं आफ्नो भोजन गर्न सक्छन्, यति कार्यालय गेट-टुगेदरका भाग लिन र. बस यकीन छ कि आफ्नो व्यक्तिगत फर्क (त्यहाँ जब कुनै पनि) काम असर छैन.
कसैमा निर्णयहरू गर्दा यी taboos ठूलो भूमिका खेल्न अनुमति कहिल्यै. यसो गर्दा मात्र तपाईं आफ्नो प्राण जोडीलाई लागि बढी प्रतीक्षा बनाउन हुनेछ.